CIN Khabar पहिलो चरणमा खोप किन्न १० देखि १२ अर्ब आवश्यक
पहिलो चरणमा खोप किन्न १० देखि १२ अर्ब आवश्यक कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि सरकारको आन्तरिक तयारी तिव्र, अग्रपङ्तिमा खटिनेले पहिलो चरणमा खोप लगाउन पाउने
गीता चिमोरिया आईतबार, कात्तिक ३०, २०७७, ०९:१४:००
विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना विरुद्धको खोप तयार भइरहेको खबरहरू आइरहँदा नेपालमा पनि कहिले खोप आउला भन्ने धेरैको चासो छ ।
कुन देशले बनाएको खोप पहिले आउला र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको नेपालजस्तो देशमा कसरी खोप आइपुग्ला भन्ने चासो पनि धेरैको छ ।
सरकारले भने कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि आन्तरिक तयारीलाई तिव्रता दिएको जनाएको छ ।
विभिन्न देशमा बनिरहेका खोपलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको र खरिदका लागि आवश्यक बजेटको तयारीमा जुटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले १० देखि १२ अर्ब रकम भएमा पहिलो चरणमा खोप खरिदका लागि श्रोत पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार खोप खरिदका लागि कानुन नभएका कारण मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय समेत गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ ।
सरकारी तहबाट बनेको यो समितिले खोपको आपूर्ति, भण्डारणदेखि प्रयोसम्मको विषयमा काम गर्ने डाक्टर कार्कीले बताउनुभयो ।
खोप आइसकेपछि कस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयार भइरहेको र पहिलो चरणमा अग्रपङ्तिमा खटिनेहरूले प्राथमिकता पाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना विरुद्धको खोप खदिरका लागि सरकारले गरेको आन्तरिक तयारी, आवश्यक बजेटको व्यवस्था, खोपको भण्डारण र खोप आइसकेपछि कस्ता व्यक्तिले प्राथमिकता पाउँछन् ? कसरी तयार हुँदैछ मापदण्ड ? लगायतका विषयमा साथी गीता चिमोरियाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहाकार डाक्टर कार्कीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
उक्त कुराकानीको अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आईतबार, कात्तिक ३०, २०७७, ०९:१४:००